Ihe ngosi 10 dị na Galaxy gafere Nkọwa 9 na ndoputa na Spain | Gam akporosis
Ihe ngosi 10 dị na Galaxy karị 9 akara na Spain
A na-akpọ Galaxy Note 10 ka ọ bụrụ otu n'ime usoro kachasị ere afọ a. Onu ogugu enwere nti, dị ka ekpughere izu gara aga, ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga. Ya mere, ọ bụ ihe na-enye olileanya maka akara Korea, nke na-ahụ na ụdị ọhụụ a nwere ike nweta nnukwu ahịa na nke a. A na-ekesa data sitere na Spain ugbu a.
Samsung nkewa nke Samsung na-ahapụ anyị data na ndoputa nke Galaxy Note 10 na Spain, nke na-adị ukwuu karịa ndị ahụ dị na Nkọwa 9. Ozi ọma maka akara Korea, nke na-ahụ ka ndị na-azụ ahịa na-akụ nzọ doro anya na ọkwa ya dị elu dị elu.
E nyeghi ọnụ ọgụgụ zuru oke, mana ọ kwadoro na Ihe ngosi 10 dị na Galaxy gafere ebe ndetu 9 dị na XNUMX. Tụkwasị na nke a, ọ dị ka ndị ahịa na-akụ nzọ doro anya na agba na nke a, nke bụ Aura Glow, nke na-agbakọta 52% nke ngụkọta ndapụta, n'etiti ekwentị abụọ ahụ.
N'aka nke ọzọ, Ihe Nleba 10 + bụ ekwentị na-ewepụta ndapụta kachasị. Dika ha kesara n'aka ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya, 71% nke ndoputa bu ihe nlere a. N'ihi ya, o doro anya na ọ nwere mmasị nke ndị na-azụ ahịa Spanish. Ọ bụ ezie na ọ bụghị nnukwu ihe ijuanya ma.
O di nwute anyị enweghị ihe gbara ọkpụrụkpụ na ọnụ ọgụgụ nke nkeji zoro aka. Ihe na-adọrọ mmasị ga-ahụ otu Galaxy Note 10 a ga-esi ree ọnwa ole na ole na-esote, ugbu a ha rere otu izu. Ọ bụ oge nke ha kwesịrị ịkwalite ahịa Samsung na nke a, n'ime oke njedebe nke furu efu n'ala n'afọ a.
Yabụ anyị ga-ege ntị nke ọma ịhụ olee otu ahịa nke Galaxy Note 10 si gbanwee. N'oge ahụ ọ dị ka ha enweela ọbịbịa ka mma na ahịa ma e jiri ya tụnyere Nkọwa 9. Ya mere, ọ nwere ike ịbụ ezigbo akara, na-egosi na ndị na-azụ ahịa nwere mmasị na ezinụlọ ọhụrụ nke ekwentị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Ihe ngosi 10 dị na Galaxy karị 9 akara na Spain